i-polycarboxylate esekelwe superplasticizer
i-naphthalene esekelwe superplasticizer
i-ejenti ebambezelayo-sodium gluconate
Intengo eshintshayo ye-Polycarboxylate superplasticizer
Uma uchwepheshe ku-polycarboxylate superplasticizer, kufanele wazi ukuthi intengo ye-polycarboxylate superplasticizer ihlala ishintsha, njengensimbi. Isizathu sentengo eshintshayo Njengeminye imikhiqizo, i-polycarboxylate superplasticizer nayo yenziwa ngezinto zayo ezingavuthiwe, njenge-TPEG, HPEG, crylic ac...
Njengoba sonke sazi, i-polycarboxylate superplasticizer iyingxube yesizukulwane esisha sikakhonkolo. Ingafinyelela ku-30% wesilinganiso sokunciphisa amanzi ngomthamo ongu-0.2% kuya ku-0.3%. Ukufinyelela ku-20% wesilinganiso sokunciphisa amanzi, umthamo we-sodium naphthalene formaldehyde uzoba cishe ku-0.8% -1%. Intengo ehlangene ye-polycarboxylate superplasticiz...
Isingeniso Sezinto Ezixubile Kakhonkolo
Ukuqonda I-Concrete Admixtures - I-concrete admixtures iyisihloko esiyinkimbinkimbi kodwa kubaluleke kakhulu ukuqonda ukuthi yiziphi izixube ezitholakalayo nokuthi zenzani. Ama-admixtures yizithako zikakhonkolo ezingaphandle kwezinto zikasimende ezisebenza nge-hydraulic, amanzi, ama-aggregates noma i-fiber rein...
Uhlobo olusha lwe-polycarboxylate superplasticizer
Namuhla, ama-oda amaningi aqala ukukhiqiza. Sithekelisa emazweni angaphandle futhi sinikezela ngesitshalo sikakhonkolo sase-Chinese readymix, isitshalo se-batching nokunye. Manje uchwepheshe wethu wenza i-polycarboxylate superplasticizer ebanzi. Izinzuzo zayo amaklayenti asebenzisa i-polycarboxylate superpl...
Iyini i-polycarboxylate superplasticizer? Iyini inzuzo yokuyisebenzisa endaweni yokwakha?
I-Polycarboxylate superplasticizer isizukulwane sesithathu se-superplasticizer esebenza kahle kakhulu eyakhiwe ngemva kwe-superplasticizer evamile emelwe i-wood calcium kanye ne-superplasticizer emelwe uchungechunge lwe-naphthalene. I-polycarboxylate based superplasticizer is cur...
Ukusetshenziswa kwe-Chengli Sodium Lignosulfonate
I-sodium lignosulfonate, ebizwa nangokuthi i-lignosulfonic acid sodium usawoti, iyi-anionic surfactant eyenziwe ngokhuni, enesisindo esimaphakathi samangqamuzana kanye noshukela ophansi. Njengengxube kakhonkolo yesizukulwane sokuqala, i-Chengli sodium lignosulphonate inezici zomlotha ophansi, okuqukethwe kwegesi ephansi kanye ne-adapthabi enamandla...
Ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kwekhonkrithi, amandla acindezelayo kanye nenani lokugcinwa kokwehla, izitshalo zekhonkrithi ngokuvamile zengeza i-admixture. Kunezinhlobo eziningi: i-ejenti yokunciphisa amanzi, i-ejenti yokumpompa, i-concrete retarder, i-defoamer, i-accelerator, i-waterproof, i-ejenti yokungenisa umoya, i-ejenti evimbela ukuqanda njll. Lonke uhlobo ...
Iyini i-Sodium Gluconate?Singayisebenzisa kanjani ?
I-sodium gluconate yaziwa nangokuthi usawoti we-sodium we-gluconic acid. Impushana emhlophe, ayinabo ubuthi, futhi inhle ekuzinzeni kokushisa. Ngaphezu kwalokho, iyancibilika kakhulu emanzini, incibilika kancane otshwaleni, ayincibiliki ku-ether. Idlala indima ebalulekile ezicini eziningi njengokwakha, i-textile p...
Izinkinga nezixazululo ekusetshenzisweni kwesengezo se-polycarboxylate
Ngokusetshenziswa okubanzi kwesengezo se-polycarboxylate, ziyanda izinkinga zohlelo ezivezwa phambi kwethu.namuhla sizoxoxa ngokuthi ziyini lezi zinkinga nokuthi singazixazulula kanjani lezi zinkinga. 1, mangakanani amanzi nosimende okufanele sengeze ngemuva kokusebenzisa isithako se-polycarboxylate se-Polycarboxylate ...
I-Sodium Naphthalene sulfonate
I-Sodium Naphthalene sulfonate iwuhlobo olulodwa lwengxube kakhonkolo esebenza kahle kakhulu. Impushana ensundu ngokuphuzi. Le ngxube ayikona ukungcola, ayihambisani nemvelo, futhi ayinabuthi. Incibilika emanzini kalula, inokusebenza okuzinzile. Inzuzo ekhethekile ihlanganisa ukusebenza okuphezulu, amanzi aphezulu okunciphisa ra ...
I-Polycarboxylate superplasticizer iyi-superplasticizer kakhonkolo yesizukulwane sesithathu eyathuthukiswa kusukela kuhlobo lwe-lignosulfonate calcium nohlobo lwe-naphthalene superplasticizer. I-Polycarboxylate superplasticizer iyi-superplasticizer eguqukayo ekhonkolo ecwaningwe ubuchwepheshe obusha.iyi-envi eluhlaza...
Umehluko phakathi kohlobo lokunciphisa amanzi lwe-polycarboxylate superplasticizer kanye nohlobo lokugcinwa kwe-slump
Izimboni eziningi zenhlanganisela kakhonkolo zinazo zombili izinhlobo zokunciphisa amanzi ze-polycarboxylate superplasticizer kanye nohlobo lokugcinwa kwe-slump, kodwa yimuphi umehluko wokusetshenziswa phakathi kwazo? Lapho izinto zakho zikakhonkolo ezinjengosimende, inhlanganisela nesihlabathi zizinhle ngokwanele, kuphela uhlobo lokunciphisa amanzi lwe-polycarboxylate superplasticizer oluzokwazi...
I-Binzhou Chengli Building Materials Co., Ltd.